Manchester United Oo War Farxadleh Ka Heshay Xiddiga La Filayo Inuu Noqdo Saxiixa Koowaad Ee Erik Ten Hag
HomeWararka CiyaarahaManchester United oo war farxadleh ka heshay xiddiga la filayo inuu noqdo saxiixa koowaad ee Erik ten Hag
June 22, 2022 Wararka Ciyaaraha, Suuqa kala iibsiga 0
Manchester United ayaa war farxadleh ka heshay xiddiga la filayo inuu noqdo saxeexa koowaad ee Erik ten Hag ee xagaagan, kaas oo u xaqiijiyey tababaraha cusub in uu doonayo inuu yimaaddo Manchester United.
Garabka weerarka reer Brazil ee Antony oo u ciyaara Ajax ayaa ogolaaday in uu tababarihiisa Erik ten Hag u raaco Old Trafford taas oo u fududaynaya United in ay gacanta ku dhigto mid ka mid ah ciyaartoyda uu ugu kalsoonida badan yahay Ten Hag.
Laacibkan oo kula guuleystay Ajax laba horyaal muddo laba sannadood ahayd oo uu u ciyaaray ayaa horumar badan oo ciyaareed sameeyey intii uu ka hoos ciyaarayay Ten Hag, waxaanay taasi keentay in looga yeedho xulka qaranka Brazil.
22 jirkan ayaa afka hore ee weerarka ka xoojin doona Manchester United kaddib bixitaankii Jesse Lingard, Juan Mata iyo Edinson Cavani iyadoo uu wali xayiran yahay Mason Greenwood oo ay dacwad ku socoto.
Manchester United oo wali aan ku guuleysanin bartilmaameedkeedii koowaad oo ahaa Frenkie de Jong oo ay ka doonayaan Barcelona ayaa waxa loo badinayaa in saxeexooda koowaad uu noqon doono Antony, laakiin waxay dhibaato ka jirtaa dhinaca qiimaha oo ay Ajax dalbanayso lacag ay Manchester United ka warwareegayso inay bixiso.
Ajax ayaa la sheegay, in ay Manchester United ku xidhay £50 milyan oo Gini oo lacag ah, waxaana la fahamsan yahay in ay diiddan yihiin inay fasaxaan laacibkan kaddib markii uu kaa tegay weeraryahankoodii Sevbastian Haller oo £33 milyan oo Gini ay ku iibsatay Borussia Dortmund.